प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली – फायरसाइड – ९ मंसिर २०७६
फायरसाइडको आजको एपिसोडमा कार्यक्रम प्रस्तोता भुषण दाहालसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
यो कार्यक्रम कान्तिपुर टेलिभिजनमा ९ मंसिर २०७६ राती १० बजे प्रसारण गरिएको थियो ।
भुषण दाहाल: प्रधानमन्त्री ज्यू, यसअघिका अन्तर्वार्ताहरुमा तपाई विकास, प्रगति, समुन्नतिको कुरा हामीलाई धेरै सुनाउनुहुन्थ्यो। यहाँका रहरहरु, लक्ष्यहरु, सपनाहरु सुनाउनुहुन्थ्यो। दुई वर्षको समय प्रधानमन्त्रीका रुपमा व्यतित गरिसकेपछि प्रगति कति भयो, विकास कति भयो, विवाद कति भयो भन्नेबाट सुरु गरौं। सर्वप्रथम अहिले चर्चाको शिखरमा रहेको नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र काली नदीको मुहान, त्यहाँ भारतीय सुरक्षाफौजको अकुपेसन। र, हाम्रो डिप्लोम्याटिक नोट। हामी यो विषयमा अहिले कहाँ छौं?
प्रधानमन्त्री: तपाईंले दुइटा कुरा उठाउनुभयो। एउटा देश कता जाँदैछ, हामी के गर्दैछौं भन्ने। अर्को सीमा विवाद र कालापानीसम्बन्धी खासगरी कालापानीमा भारतीय फौज र लिम्पियाधुरासम्बन्धी कुरा। पहिलो त हामी नेपाली जनताको आकांक्षा साकार पार्ने हिसाबले अगाडि बढिरहेका छौं। हामीले हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षालाई दुईवटा साना वाक्य समृद्ध नेपाल: सुखी नेपालीमा समावेश गरेका छौं। यसलाई प्राप्त गर्ने बाटो के होभन्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। यसको हामी कसरी परिभाषित गर्छौं भन्दा लोकतन्त्र राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र होइन, समग्र विस्तृत लोकतन्त्र हामीले भनेका छौं। त्यो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि फैलिनुपर्‍यो, विस्तार हुनुपर्‍यो। २०४६ सालपछि राजनीतिक लोकतन्त्र हामीले ल्यायौं। तर त्यसलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रतिर विस्तार गर्न सकेनौं। तपाईसँगै भएका अघिल्ला संवादहरुमा भएका कुराहरु हेर्नुभयो भने उसबेला पनि मैले भनेको छु, लोकतन्त्रलाई यदि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रसम्म विस्तार गर्न सकिएन भने र राजनीतिक अधिकारका क्षेत्रमा, स्वतन्त्रताका क्षेत्रमा मात्रै सीमित गरियो भने जनतामा सन्तुष्टि पनि हुँदैन। विकासले बाटो पनि लिँदैन। हामीले अब त्यो बाटो समातेका छौं। अहिले यस प्रश्नमा मैले यति भन्न खोजें।
भुषण दाहाल: एकाएक यो नयाँ सीमासम्बन्धी विवाद, समस्या र फेरि एउटा पुरानो निको नभएको घाउ बल्झिएको छ। यसको टाइमिङ्गलाई प्रधानमन्त्रीको स्ट्याण्ड प्वाइण्टबाट आकस्मिक मात्र मान्नुहुन्छ कि यसमा अन्य राजनीतिक सोचनीय विषयहरु छन्?
भुषण दाहाल: शेरबहादुरजीको भनाईप्रति ईंगित गर्नुभएको हो?
भुषण दाहाल: प्रधानमन्त्रीज्यू, जसरी विवादित भूमि र हाम्रो भूमिमा अकुपेसनको चर्चा चलिरहेको छ। यसको ऐतिहासिक तथ्यबारे यहाँले बताउनुभयो र सहकर्मी राजनीतिज्ञहरुको वक्तव्यवाजीले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई गिराउने, होच्याउने मात्रै विषय यो होइन पनि भन्नुभयो। तर इतिहासले तपाईलाई यस्तो मौका दिएको छ। मानिसहरु भनिरहेका छन्, नेपालमा जुद्धशमशेरपछि अथवा बीपी कोइरालापछि सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी शर्मा ओलीले ओहदा ग्रहण गर्नुभएको छ। यो ऐतिहासिक मौकामा यस्ता आउटस्ट्याण्डिङ्ग राष्ट्रिय विषयहरुलाई किनारा लगाउनका लागि जुन किसिमको कूटनीतिक कोशिश मात्रै देखिएको छ नि कर्मचारी तहमा, तलतलैबाट मात्र सुरु गर्ने हो कि तपाईँजस्तो प्रधानमन्त्रीले टेलिफोन उठाएर भारतीय समकक्षीलाई आउनुहोस् बसौं र यो कुरा सकौं भन्ने हो? कि यति सामान्य छैन यो कुरा?
भुषण दाहाल: तत्कालीन हिसाबमा यी प्रश्न उठ्दाखेरि सरकार गिर्थ्यो होला। तर तपाईको अहिलेको शक्तिको यदि व्याख्या गर्ने हो भने सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री मुलुकले पाएको छ। फरक त पर्छ होला?
भुषण दाहाल: यसमा पब्लिकको एउटा भित्री जान्ने इच्छा छ। अहिले जो जसको कार्यकारी भूमिकामा मुलुक छ। नेपालका तर्फबाट केपी शर्मा ओली र भारतका तर्फबाट नरेन्द्र मोदीको बीचमा यो भूमि र यसको स्वामित्वको बारेमा सोझै वार्ता अघि बढाउन सकिन्छ कि ब्यूरोक्रेटिक गृहकार्य गरेपछि मात्रै त्यो समय आउँछ?
भुषण दाहाल: आलोचकहरुले भनेजस्तै केपी ओलीको राष्ट्रवाद कालापानीमा पुगेर लम्पसारवादमा परिणत भयो...?
भुषण दाहाल: प्रधानमन्त्रीज्यू, अब काममै फर्कौ, त्यसो भए पार्टीभित्र पनि यहाँले खुलेर निर्णय लिनुभयो। प्रचण्डजीलाई कार्यकारी अध्यक्षको पद सुम्पिनुभयो। मन्त्री फेरबदल जति ठूलो सोचिएको थियो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको अभ्यासजस्तो गरेर सकियो भनौं। त्यसमा पनि अलिकति कुरा गरौंला। तर पार्टीको नेतृत्व जसरी प्रचण्डजीलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो त्यसले नेकपाको जुन एकीकरण प्रक्रियाका बाँकी रहका कामहरु थिए, त्यसको टुंगोमा पुगेको संकेतका रुपमा यसलाई लिने हो?
भुषण दाहाल: पार्टीभित्रको त्यत्रो ठूलो लिगेसी रहेको छ। तपाईले हामीलाई जसरी स्मरण गराउनुभयो। तपाईँको नेतृत्वमा पार्टीले लिएका अडानहरु, बाटोहरु छन्। यो सबै चिजको स्वामित्व अब पार्टीगत रुपमा जसरी तपाईले कार्यकारी अध्यक्षता प्रचण्डजीलाई सुम्पनुभयो, त्यो लिगेसी धान्नसक्ने काँध देख्नुभएको छ प्रचण्डजीमा?
भुषण दाहाल: त्यो त बुझेँ। तर अहिले जुन किसिमको...?
भुषण दाहाल: प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पार्टीभित्रैबाट जुन एउटा जेन्टलमेन एग्रेमेन्टअनुसार आधाआधा भएपनि आधा समयभन्दा धेरै अगाडिदेखि विभिन्न राजनीतिक तिकडमहरुले इरिटेड गरिरहेको थियो। अबचाहिँ त्यो इरिटेशन टुंगो लागेको हो?
भुषण दाहाल: त्यसो भए प्रचण्डजीको बढुवा भएको होइन?
भुषण दाहाल: तर लामो सन्तोषको श्वास फेरेजस्तो, बल्ल कार्यकारी भएँ भनेर उहाँले अभिव्यक्ति दिन थाल्नुभयो नि?
भुषण दाहाल: एउटा दापमा दुईटा खुकुरी हुँदा गाह्रै थियो नि?
भुषण दाहाल: जेट विमान हो, दुईवटा पाइलटले उडाउने?
भुषण दाहाल: तर, दुईवटै पाइलट हुँदैन। एउटा को पाइलट हुन्छ...?
भुषण दाहाल: प्रधानमन्त्रीज्यू, म एउटा मौका छोप्न चाहन्छु। यो पार्टीमा भएको पछिल्लो जुन परिवर्तन छ। अथवा यसलाई एडजस्टमेन्ट भनौं। यसको टुंगो भनौं। यसमा अहिले यहाँले गर्नुभएको मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठनको जस्तो नक्सा बाहिर देखियो नि, त्यो पनि संझौताको विषय थियो?
भुषण दाहाल: भनेको मतलब?
भुषण दाहाल: गएका सबै असक्षम। आएका उहाँहरु सबै सक्षम?
भुषण दाहाल: त्यही सोध्दैछु। जनमानसको बुझाइ त त्यस्तै भयो कि?
भुषण दाहाल: तर किन हट्छन् त? किन नयाँ आउँछन्? किन हटाइन्छन्?
भुषण दाहाल: गणतान्त्रिक संविधान निर्माण भइसकेपछिको पहिलो सरकारको नेतृत्व तपाईले गर्नुभयो र तपाईंहरु बारम्बार जनतालाई यही सम्झाइरहनुहुन्छ कि नेपाल अब गणतान्त्रिक मुलुक भइसक्यो। तर यहाँकै मन्त्रिमण्डलमा म धृष्टतै गरेर भन्छु, नातै पर्ने मानिसहरु टिकाइरहनुपर्ने, राखिरहनुपर्ने मन्त्रीका रुपमा ! यसमा प्रोग्रेस रिपोर्ट पब्लिकले र प्रेसले राम्रो नदिएको अवस्थामा गणतन्त्रको महसुस आम जीवनले गर्नलाई अलिकति मन खुम्च्याइरहेको अनुभव गर्नुहुन्छ कि हुन्न?
भुषण दाहाल: प्रधानमन्त्री त तपाई हुनुहुन्छ नि? देशको कार्यकारी त तपाई हो?
भुषण दाहाल: त्यसबाट मुक्तिचाहिँ पाइएको छैन?
भुषण दाहाल: तर यस्तो आशीर्वाद प्राप्त पात्रहरुले एउटा प्रमुख कार्यकारीलाई जुन विकास र प्रोगेसको सपना उसले देखेको हुन्छ, त्यसमा पूर्ण रुपले सन्तोषपूर्ण साथ त पाएको हुने रहेनछ हगि?कम्प्रमाइजमा साथ मात्रै !
भुषण दाहाल: म अब अर्को प्रश्नमा जान्छु। सरकारका सहकर्मी पार्टीका नेता विदेशमै हुँदा उहाँको मन्त्रालय परिवर्तन भयो। छलफल भएरै परिवर्तन भयो कि प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार प्रयोग भएको हो?
भुषण दाहाल: तर प्रधानमन्त्रीले सहयोगका लागि सरकारमा ल्याएको तर सोचेजस्तो र भनेजस्तो साथ नपाएपछि प्रधानमन्त्रीले यो हेरफेरमा उपेन्द्र यादवमाथि एउटा राजनीतिक भाषा प्रयोग गरेको भन्ने टिप्पणी पनि छ नि?
भुषण दाहाल: उपेन्द्रजीले सरकार छोड्नुहुन्न है त्यसो भए?
भुषण दाहाल: अब सरकारको डेलिभरी र मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनपछि यहाँले दिनुभएको पहिलो निर्देशन मन्तव्यमा फेरि खाल्डाखुल्डी फागुनसम्म पुरा भन्नुभयो। मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनपछिको पहिलो निर्देशनमा फेरि खाल्डाखुल्डीकै कुरा गरिरहने हो भने त महानिर्देशक, सचिव र अन्य निकायले काम गर्दैनन् यो मुलुकमा?
भुषण दाहाल: गुणस्तरहीन निर्माण भइरहुन्जेल त खाल्डाखुल्डी सधैं भइरहन्छन् प्रधानमन्त्रीज्यू?
भुषण दाहाल: अब अर्को महत्वपूर्ण चर्चा र विश्लेषणका रुपमा आउन थाले कि राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखको कार्यक्षेत्र ओभरल्याप हुन थाल्यो। राष्ट्रप्रमुखले प्रमुख कार्यकारीको काम कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्न थाल्नुभयो। पार्टीको आन्तरिक कामसमेत मिलाउन थाल्नुभयो भन्ने कुराको बाहिर धेरै चर्चा छ। केही छ सत्यता यसमा?
भुषण दाहाल: तर अस्ति मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको निर्णय जुन लिनुभयो, त्यसको टाइमिङ्गका कारण पनि त्यो सन्दर्भ चर्चित भयो कि दुवै जना अध्यक्षले राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेर...?
भुषण दाहाल: त्यो रुटिन बिफ्रिङ्ग र मिटिङ्ग मात्र थियो?
भुषण दाहाल: त्यो त राष्ट्रपतिले संसारभरि गर्ने काम त त्यही नै हो नि?
भुषण दाहाल: एकसमय नेपालमा अर्कै शासनप्रणाली हुँदाखेरि श्री ५ को सरकार भन्ने चलन थियो र श्री ५ ले मेरो सरकारभन्दा ठीकै सुनिन्थ्यो होला। तर अहिले सरकारै नेपाल सरकार भएको हुनाले
भुषण दाहाल: अर्को प्रसङ्ग पनि आयो। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, जहाँ बहुमतबाट निर्णय लिन सकिन्छ भन्ने व्यवस्थासहित राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको छ नि?
भुषण दाहाल: अध्यादेशको आवश्यकता किन पर्‍यो भन्छन्?
भुषण दाहाल: पठाउनु त भएको छ नि?
भुषण दाहाल: तर विपक्षीको कन्सर्न.....?
भुषण दाहाल: तर प्रतिपक्षसहितको संवैधानिक परिषद निर्माण गर्दाखेरि काम गर्न अप्ठेरो भएको छ र?
भुषण दाहाल: अप्ठ्यारै हुनुहुन्छ शेरबहादुरजी मान्छे काम गर्न?
भुषण दाहाल: सरकारको कार्यकारी प्रमुखको पदबाट अहिले सुशासनका कुराहरु धेरै सुनिन्छ। यहाँहरु बताउनु पनि हुन्छ। तर मेडिकल स्टुडेन्टहरु देशभरि आन्दोलित छन्। सरकारले फिर्ता गर भनेको अतिरिक्त शुल्क पनि सञ्चालकहरुले अटेर गरेर फिर्ता नगरी बसेको अवस्था छ। विद्यार्थीहरुमाथि दमनका समाचार पनि सुनिएको छ। कसरी हेरिरहनुभएको छ?
भुषण दाहाल: तर जुन अड्डी सञ्चालकहरुले गरिरहेका छन्। बरु सरकारलाई साँचो बुझाइदिन्छौं भनिरहेका छन् नि?
भुषण दाहाल: सरकार विद्यार्थीहरुको पक्षमा छ?
भुषण दाहाल: अर्को अहं प्रश्न। हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन लाग्यो तर संसद नेतृत्वबिहीन छ। एउटा मनस्थितिमा पुगिसक्नुभयो? कसलाई सभामुख बनाउने?
भुषण दाहाल: मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको पहिलो अध्यक्ष, कार्यकारी प्रधानमन्त्री केही न केही सोंच विचार त होला नि?
भुषण दाहाल: तर उपसभामुखले राजीनामा दिनुभएको छैन?
भुषण दाहाल: किनभने संविधानतः एउटै पार्टीको सभामुख र उपसभामुख नहुने व्यवस्था छ क्यारे?
भुषण दाहाल: चासो धेरै छ। यसमा पनि दुई जना अध्यक्षको एउटै च्वाइस छ कि फरकफरक छ?
भुषण दाहाल: यो सोध्न मिल्छ कि मिल्दैन। पूर्व एमालेबाट हुन्छ कि पूर्व माओवादीबाट हुन्छ?
भुषण दाहाल: प्रधानमन्त्रीज्यू, यति लामो कुरा गरिसकेपछि, म फेरि तपाईको वैयक्तिक पक्षलाई सम्मान पनि गर्न चाहन्छु। तर जनजनको चासो यहाँको स्वास्थ्यस्थितिका बारेमा व्याप्त छ। जनतालाई (यु आर फ्रि टु टेल देम एबाउट योर हेल्थ ) केही भनिदिनु न?
भुषण दाहाल: आराम फिल हुन्छ त्यसपछि?
भुषण दाहाल: स्वास्थ्यस्थितिको अहिले जुन किसिमका चर्चा परिचर्चा...? त्यस्तो अनावश्यक चिन्ता गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन?